လှပသော ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် ၈ စက္ကန့် ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
လူလတ်ပိုင်းအရွယ်မှာ ခန္ဓွာကိုယ်နောက်ပိုင်းမှာ အဆီတက်လာခြင်း၊ ဗိုက်ပူလာခြင်းတို့ဟာ ဖြစ်လာပြီး
ကိုယ်ခန္ဓါအချိုးအစားဟာ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ အနေအထားအဖြစ် ပြောင်းလဲလာတာ ကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။
TV၊ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ လွယ်ကူတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Mori San ရဲ့ဖြေကြားချက်ကတော့ “ခန္ဓာကိုယ် နောက်ပိုင်း ကြွက်သားတွေဟာ ခြေထောက်နှင့်ယှဉ်လျှင် လှုပ်ရှားမှုနည်းပါးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေပါ။
အသက် ၃၀ ကျော်လာရင် ခန္ဓာကိုယ်နောက်ပိုင်း ကြွက်သားတွေဟာ အားနည်းလာတဲ့အတွက် ခါး၊ တင်၊ ရင် တွေရဲ့ကြွက်သား ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း လျော့နည်းလာပါတယ်။
လူလတ်ပိုင်းအရွယ်တွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားပြောင်းလဲရခြင်းအကြောင်းရင်းက အဆိုပါကြွက်သားတွေ အားနည်းလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လူလတ်ပိုင်းအရွယ်တွေအတွက် လွယ်ကူတဲ့လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ပုံကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Mori San ဟာအသက်၄၀ကျော်အရွယ်မှာ ကလေးမွေးဖွားပြီး ၁လကြာလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရုံဖြင့် ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်အချိန်က ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားကိုပြန်ရခဲ့ပါတယ်။လူလတ်ပိုင်း အရွယ်တွေဟာ ခန္ဓွာကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် Diet လုပ်ခြင်း ၊ပြင်းထန်တဲ့အားကစားတွေကိုလုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။
အရေးကြီးတာက မတ်တပ်ရပ်တဲ့အခါ အသုံးပြုသော ကြွက်သားတွေကသာ အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ ဆွဲအားကို ဆန့်ကျင်ပြီး ရပ်နေတဲ့အတွက် ကျော ၊ ဗိုက် မှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေကို သုံးရမှာဖြစ်ပင်မဲ့ ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံနဲ့သွားလာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားလည်း မမှန်တော့ပါ။ ခန္ဓာကိုယ် အနေအထားကို ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့အတွက် ၈ စက္ကန့်လေ့ကျင့်ခန်းလေးကို တင်ပြပါရစေ။
ဖနောင့်တွင်အားပြု၍ ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ ခြေဖျားထိပ်ကို ၄၅ ဒီဂရီခန့် ဘေးသို့ကားပြီး မတ်တပ်ရပ်ပါ။
၀၂. ဒူးကွေး၍ ခါးကိုအောက်သို့ နှိမ့်ချပါ
ဒူးကွေး၍ ခါးကိုအောက်သို့ နှိမ့်ချရာတွင် ခြေမျက်စိတွင်အားမသက်ရောက်ရပါ။
၀၃. ခြေနှစ်ဖက်လုံး၏ ဒူးတွေကိုကပ်ထားပါ
ဒူးကွေး၍ခါးကိုအောက်သို့ချထားသော အနေအထားဖြင့် ဂုံညင်းများကို အချင်းချင်းထိအောင် ကပ်လိုက်ပါ။
၀၄. ဂုံညင်းကိုကပ်ထားရင်းဖြင့် ဒူးခေါင်းကို ဆန့်ထုတ်ပါ။ နံပါတ်(၃)အနေအထားဖြင့် ဒူးခေါင်းကို ဆန့်၍မတ်တပ်ရပ်ပါ။
အထက်ပါလှုပ်ရှားမှုများသည် ခန္ဓွါကိုယ်အောက်ပိုင်းအတွက် ဖြစ်ပါသည်။
၀၅. လက်နှစ်ဘက်ကို မိုးပေါ်သို့ Y ပုံစံမြှောက်ထားပါ
ခြေထောက်ကို မရွေ့ဘဲ လက်နှစ်ဘက်လုံးကို Y ပုံစံ အပေါ်သို့မြှောက်ထားပါ။ပြီးလျှင် လက်ဖဝါးနှစ်ဘက်က ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းပိုင်းကို မျက်နှာပြုထားပါ။
၀၆. လက်ကိုအပေါ်ကို မြှောက်ထားလျှက် ခါးကိုရှေ့ပိုင်းသို့ကိုင်းထားပါ
လက်ကိုမြှောက်လျှက်အနေအထားဖြင့် ခန္ဓွာကိုယ်ကိုရှေ့သို့ ဖြေးဖြေးချင်း ကိုင်းပါ။ ၄၅ဒီဂရီ ခန့်ဖြစ်အောင် ကိုင်းထားပါ။
၀၇. လက်ကိုအောက်သို့ချထား၍ တင်ပါး၏ ဘေးတွင်ထားပါ
ခန္ဓွာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို ကိုင်းထားသောအနေအထားဖြင့် လက်နှစ်ဘက် ကိုအောက်သို့ချပါ။ တင်ပါး၏ နောက်ပိုင်းသို့လက်ကို ဆွဲသွားပါ။
၀၈. ဖြေးဖြေးချင်း တည့်တည့်ပြန်ရပ်ပါ
အဲဒီအတိုင်း ခန္ဓွာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို တည့်တည့်ပြန်ရပ်ပြီး လက်ကိုခန္ဓွာကိုယ်ဘေးသို့ သဘာဝရှိနေတဲ့အတိုင်း ပြန်ထားပေးပါ။
မှန်ရှေ့မှာ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကို စမ်းပြီးလုပ်ကြည့်လိုက်လျှင် ၈စက္ကန့်နဲ့ ကြွက်သားနာကျင်ခံစားမှု အနည်းငယ် ဖြစ်လာပေမယ့်လည်းထိရောက်မှုရှိသော လေ့ကျင့်ခန်းလေး ဖြစ်မှာပါ။ အခြေခံလှုပ်ရှားမှုမှာ စနစ်ကျတဲ့နည်းစနစ်ကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ခဏလေးလုပ်ကြည့်လိုက်ရုံဖြင့် လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားလေးကို ပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်စေမှာပါ။